Inflọ ahịa ndị na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe dị iche iche na-ere ahịa, Stunt Airbag, Park Water Inflatable maka ire | Ọ Infụ inflatable
Professionallọ ọrụ aka ọrụ ọkachasị omenala inflatable tent na inflatable mmiri ogige- Joy Inflatable.
A na-adọba ogige mmiri
Ụlọikwuu nwere nnukwu ụlọikwuu
Ụlọikwuu na-efe efe
Ụlọikwuu ahụ ike
Egwuregwu na-efe efe
Mgbasa ozi na-efe efe
Nnukwu Mmiri Atụrụ
0.9mm PVC tarpaulin kpuchie vinyl
30 Celsius 30 m Ibu ibu: 1500kg
JOY bụ ọkachamara nke na-emepụta ogige a na-egwu mmiri, ụlọikwuu a na-efe efe na akpa ikuku na-esighị ike kemgbe 2001.
Isi ngwaahịa gụnyere mmịpụta mmiri na-efe efe, ogige mmiri na-ese n'elu mmiri, na-efegharị ụlọikwuu, egwuregwu inflatable, stunt airbag, mgbasa ozi inflatable, wdg.
Nnukwu anụ ahụ na-eme ka a na-ebuga ikuku ikuku na-enweghị isi na-enweghị isi okwu nke sking
Nnukwu ihe na-egbu egbu na-enweghị isi na-enweghị isi nke Skiing + https: //www.vinflateble.com
Ụlọ ọgwụ na-eme ụlọ ọgwụ na-enweghị atụ maka enyemaka mbụ
Flomlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ na-enweghị atụ maka enyemaka enyemaka + nke mbụ: //www.inwflateble.com
Mobile Coronavirus na-ebugharị ụlọikwuu maka mgbapụta mberede
Mobile Coronavirus na-ebutentaị n'ụlọikwuu maka mgbapụta mberede, lelee ya!
Party PVC doro anya PVC na-agbagha afụ ụlọikwuu
Party PVC flatable Budfụ camy Home n'ụlọikwuu + https: //wwwflateble.com
Atụmatụ: Chọta ihe ndị ahịa chọrọ na nchegbu ndị a; Dakọtara ụdị, agba, nha, ọrụ nke ngwaahịa na ego onye ahịa; Dabere na ihe ndị ahịa chọrọ chọrọ na nchegbu ya, kwurịtanụ ntụzịaka ma ọ bụ ntụzịaka ọ ga-esi kwe omume.
Ngwọta: Mee ihe osise 3 D dabere na ihe onye ahịa chọrọ; Kpebisie ike ma dozie ya; Meputa usoro ihe eji emeputa ya na ndetu puru iche banyere osisa.
Nmeputa: Dika usoro isi doputara eserese na isi ya; Soro usoro nhazi ma were vidiyo ndị metụtara ndị ahịa na-egosi; Nwalee ngwaahịa a ma lee vidiyo n'oge ule.
Azụ ahịa / Nzaghachi: Zipụ vidiyo ndị metụtara ya ma soro ndị ahịa kwurịta okwu; Nnyefe; Kwụghachi nletaghachi na ọnọdụ iji ya.
Agbagburu vidiyo vidiyo ndị a niile ma anyị nwalee ngwa ahịa ndị na-enye inflatable site n'aka ndị otu anyị na-agbapụ, ma ọ bụ nzaghachi ndị ahịa anyị na-agbagharị na ọnọdụ ahụ. Ihe kacha egosiputa udiri ya, ihe omuma ya, oru ya na agba ya na otu anyi. Site na ya ọ baara anyị uru imezi….
Guangzhou Joy inflatable Limited bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ama ama na ogige mmiri inflatable, ụlọikwuu inflatable na akpa ikuku stunt. Anyị nwere ike ịnye gị ihe edozibere maka ọnọdụ gị. Nke a nwere ike ịbụ ngwakọta ngwaahịa nke gị dabara na oke, mmefu ego na oke. Site na ahụmịhe anyị site na afọ 10 gara aga na mba 50, anyị maara ndị setịpụrụ ihe na-eme ka uche dị na ntụrụndụ na arụ ọrụ.
A na-eji ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ebe ntụrụndụ, ihe ngosi, njem, ihe ịma aka kachasị maka maka ime ụlọ na n'èzí, na ogige mmiri wdg, ntụrụndụ / ihe ụtọ / egwuregwu / ebe ndị njem na ebe ndị ọzọ. Anyị maara, n'okporo ụzọ dị n'ihu, enwere ohere na nsogbu, asọmpi na mmekọrịta. Mana anyị kwenyere na ihe omuma na teknụzụ ọhụụ ga-arụ ọrụ dị mkpa n'ụzọ nke mmepe na ihe ọhụrụ mgbe niile.
anyị na-ahụ na anyị nwere ike ịnye ngwaahịa ruru eru ma dị mma inflatable, dabere na ndị ọrụ anyị nwere ahụike, igwe dị elu na njikwa njikwa njikwa dị mma.
Kpọtụrụ anyị Nweta Ekike a Na-akwụghị Ego
Pụrụ iche na inflatable tent na floating mmiri ogige nhazi. Anyị na-enye omenala dị iche iche dị ka agba, nha, ụdị, ọdịdị ọdịdị, njikwa, mbipụta, wdg. SGS, CE, UL na asambodo ndị ọzọ maka ihe na ngwaahịa.